Nhau - Iko Kukura Kwemaitiro Eiyo Aquarium Mvura Pombi Uye Solar Mvura Pump
Mvura Inonatsa RO Pump
Mhepo Inotonhorera Pump
Iko Kukura Kwemaitiro Eiyo Aquarium Mvura Pump Uye Solar Mvura Pump
Kana iri YUANHUA kambani, yedu R & D department inogara ichigadzira zvigadzirwa zvitsva, izvo zvinosangana nezvinodiwa zvevatengi vakasiyana mumisika yepamba neyekunze.
Kushamisiko yedu, Inotapurwa nehutachiona hutsva hwekorona, indasitiri yemvura yekutsime uye kudiwa kwemusika wezuva kwakasimba gore rino, uye nenzira, mapampu emvura e aquarium uye mapombi emvura ezuva akakurawo mune ino maitiro.
Pombi dzemvura dzinokanganiswawo nedenda iri. Kuburitswa kwenyika huru dzinogadzira mhangura pasi kwadzikira, asi kudiwa kwemhangura kweChina kwawedzera. Mhangura yemhangura ndiyo yakakosha mbichana mapombi emvura, zvichikonzera kuwedzera kwemutengo wekugadzira weindasitiri yepombi yemvura.
Kushomeka kwesimba uye kusvibiswa kwezvakatipoteredza zvazove zvinhu zvakakosha zvikuru kugadziriswa mukusimudzira nzanga yanhasi. Kure
Zvinetso zvekuchengeta zvipfuyo uye mvura yekunwa mudunhu zvinowanzo ganhurirwa neganhuriro dzedunhu - tichiona matambudziko ari pamusoro, photovoltaic pombi yemvura inobuda sezvinodiwa nenguva.
Mune ino bepa, musimboti wekutanga uye chimiro che photovoltaic pombi yemvura yakapfupikiswa, uye kuferefetwa kufambira mberi uye chinzvimbo cheiyo ye photovoltaic pombi yemvura inokurukurwa, bepa iri rinokurukura uye rinoongorora rinotevera tsvagurudzo yekufotokota mvura pombi iyi bepa rinoongorora kugona uye nerubatsiro rwemagariro eiyo photovoltaic pombi yemvura, iyo tarisiro yekushandisa ye photovoltaic pombi yemvura system inotarisirwa.
Solar photovoltaic pombi yemvura sisitimu inoumbwa nebhatiri module, tambo inodzora unit, mota, pombi, pombi uye vharafu. Iwo musimboti weiyo photovoltaic pombi yemvura sisitimu ndeye kushandisa rezuva maseru kushandura simba rezuva kuita simba remagetsi, uyezve kutyaira mota kutyaira photovoltaic pombi yemvura kuburikidza nemutongi. Photovoltaic pombi yemvura sisitimu inogona kushandiswa zvakanyanya mumvura kune vanhu nezvipfuyo munzvimbo dzisina magetsi, kudiridza kwekurima uye kwakanyanya nzvimbo dzekupararira dzakadai semuganhu zviwi uye varindi. Mumakore achangopfuura, nekuwedzera kuri kuwedzera kwe "dambudziko rechikafu" uye "dambudziko remagetsi", zvakarumbidzwa zvishoma nezvishoma sechigadzirwa chinobudirira kwazvo chemabhizimusi kugadzirisa dambudziko repasi rakarimwa, kuvandudza kugadzirwa uye kutsiva simba remafossil simba Iiyo nyowani yezvehupfumi modhi yekusimudzira kwakazara kwemaindasitiri echinyakare senge ekurima emvura kuchengetedza, gwenga kudzora, kushandiswa kwemvura mudzimba uye kuguta kwemvura. Photovoltaic pombi yemvura inoshandisa iyo isingaperi simba kubva kuzuva. Inoshanda pakubuda kwezuva uye inomira pakuvira kwezuva. Izvo hazvidi kuti zviongororwe nevashandi. Hazvidi mafuta edhiziri uye grid yemagetsi. Inogona kushandiswa nemadiridziro ekudiridza, kusasa kudiridza, kudiridza kwepinda uye zvimwe zvivakwa zvekudiridza. Inogona kuchengetedza mvura uye chengetedza simba, uye kudzora zvakanyanya mutengo wekudyara wesimba remagetsi. Haina ruzha, hapana kusvibiswa kwezvakatipoteredza, hapana kudyiwa kwesimba simba, otomatiki, yakakwirira kuvimbika yakazvimirira system. Iyo isimba nyowani uye nyowani tekinoroji yekushandisa chigadzirwa chepasi rese "dambudziko rechikafu" uye "simba dambudziko" yakazara system mhinduro. Kwenguva yakareba, pakanga pasina kusanaya kwemvura
Post nguva: Sep-07-2020
Runhare:0086 595 87298199